अमेरिकाले ओलीलाई अपदस्थ गर्न कदम अपनायो भने त्यो आश्चर्य हुने छैन | NepalDut
अमेरिकाले ओलीलाई अपदस्थ गर्न कदम अपनायो भने त्यो आश्चर्य हुने छैन
मोहनविक्रम सिंह -
अन्तमा, हाम्रो पार्टीले भेनेजुएलाका जनता र त्यहाँका राष्ट्रपति मडुरोको अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धको अडान तथा समाजवाद र आफ्नो देशको राष्ट्रियताका पक्षमा अपनाएको नीतिलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ । भेनेजुएलाका जनताको अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि आफ्नो ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।”भेनेजुएलामा आज जुन सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यो अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीतिको परिणाम हो । भेनेजुएला विश्वको पेट्रोलको सबैभन्दा धनी देशहरूमध्य एक हो ।
त्यहाँ सुन र हिराका पनि ठुलाठुला खानीहरू छन् । यो साँच्चिकै आश्चर्यको कुरा हो कि त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भएको देश आज गम्भीर प्रकारको आर्थिक सङ्कटमा छ ।
भेनेजुएलामा हालै भएको चुनावमा मदुरो पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । अमेरिकाले जस्तो कि पहिले चाभेजका चुनावहरूमा रपछि मदुरोको पहिलो चुनावमा भन्दै आएको थियो– अहिलेको चुनावलाई पनि अपारदर्शी भएको बताउँदै त्यहाँ पुनः निर्वाचनको माग गरेको छ । अन्य साम्राज्यवादी देशहरूले पनि त्यही प्रकारको मत प्रकट गरेका छन् । त्यही क्रममा भेनेजुएलाका विरोधी पार्टीका नेता र संसदका सभामुख जुआन गोएइदोले पनि आफूलाई सडकबाट नै अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा निर्वाचित वर्तमान राष्ट्रपति मदुरोका विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरिरहेका छन् ।
बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि अमेरिकी साम्राज्यवादको ग्राइन्ड डिजाइन र वर्तमान राष्ट्रपतिलाई अपदस्त गराउने रणनीति अन्तर्गत नै त्यस प्रकारका कार्यहरू गरिएका छन् । अमेरिकाकोपछि लागेर अन्य साम्राज्यवादी वा साम्राज्यवादपरस्त देशहरूले पनि स्वघोषित राष्ट्रपति गोएइदोलाई समर्थन गर्दै गइरहेका छन् । तर यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि रूस, चीन, भारत र पाकिस्तान समेतले वर्तमान राष्ट्रपति मदुरोलाई समर्थन गर्दै त्यहाँ भइरहेको बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले अमेरिकाको त्यस प्रकारको व्यवहारप्रति विरोध जनायो कि जनाएन ? त्यसबारे सरकारले जबाफ दिनु पर्दछ । जे होस्, यसका लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ कि अमेरिकाले त्यस प्रकारको स्पष्टीकरण मागेपछि कमसेकम कूटनीतिक भाषामा भए पनि नेपाल सरकारले प्रचण्डको वक्तव्यको मूल स्प्रिटलाई नै समातेर वक्तव्य दिएको छ । प्रचण्डको वक्तव्यमा, प्रथम, मदुरोको सरकारलाई समर्थन गरिएका छ भने द्वितीय, अमेरिकी हस्तक्षेपको स्पष्ट शब्दमा विरोध गरिएको छ । ती दुवै कुराहरू सरकारको वक्तव्यमा सामेल गरिएका छैनन् ।
उनीहरूले खालि त्यहाँका जनतालाई बाह्य हस्तक्षेप बिना आफ्नो समस्याको समाधान गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ भनिएको छ । अप्रत्यक्ष रूपले त्यस प्रकारको भनाइ पनि त्यहाँ भइरहेको अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध नै हो । तर सरकारको त्यो वक्तव्यमा जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट प्रकारले समर्थन गर्ने काम गरिएको छैन । त्यसले (सरकारले) दवेको स्वरमा नै भेनेजुएलाप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने गरेको देखिन्छ ।
कुरा भेनेजुएलाको हो । अहिले हामी त्यहाँको मदुरो सरकार र भेनेजुएलाको भविष्यवाणी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भविष्यको गर्भमा लुकेका कैयौँ तत्वहरूद्वारा नै त्यो कुराको फैसला हुँदै जानेछ । खालि हामी यस कुरामा स्पष्ट छौँ कि हामीले मदुरो सरकारलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ र त्यहाँ भइरहेको अमेरिकन साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दछौँ । तर भेनेजुएलाको घटनाक्रमको असर शायद त्यहीसम्म मात्र सीमित रहने छैन र नेपालमा पनि त्यसका कैयौँ गम्भीर परिणामहरू हुन सक्ने सम्भावनातिर पनि हामीले आफ्नो ध्यान हटाउनु सही हुने छैन ।
अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा अपनाउँदै आएको साम्राज्यवादी शैलीमाथि ध्यान दिदा त्यो पक्षलाई पनि पुरै उपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालको सरकारले भेनेजुएलाबारे अपनाएको नीति अनेरिकी साम्राज्यवादी नीतिका विरुद्ध भएको कुरा स्पष्ट छ । त्यसको प्रतिक्रिया ओलीले बोलाएको विदेशी निकायका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थितिसम्म मात्र सीमित रहनेछ वा त्यो अन्य कुनै रूपमा पनि विस्फोट हुँदै जानेछ ? त्यो आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।